Fa maninona ny mailako no miteny amin'ireo mpandray tsy ekena? - Faq
Tena > Faq > Ny dikan'ny mpandray tsy fantatra - valiny sy fanontaniana mahazatra
Ny dikan'ny mpandray tsy fantatra - valiny sy fanontaniana mahazatra
Fa maninona ny mailako no miteny amin'ireo mpandray tsy ekena?
Rehefa mahita anmailakaamin'nynyboaty mailaka izay niresaka tamin'i 'Mpandray tsy ekena', midika fotsiny izany hoe ilay olona mandefa ilaymailakanatao ambanin-javatra ny fametrahana na inona na inona ao anaty boaty To:Ny sitrakaomandray anmailakarahovianany mailakaony adiresy dia miseho ao amin'ny To: na ny Cc: na ny sahan'ny Bcc.6 feb 2020
- Hey, mandefa mailaka vondron'olona tsy mifankahalala ve ianao? Ohatra tsara dia mety amin'ny fandefasana mailaka an'ny mpanjifanao na fanasana amin'ny hetsika orinasa. Raha manao izany ianao dia hizara ny fomba hahazoana antoka fa tsy mahasosotra olona amin'ny fizarana ny mombamomba azy ireo amin'ireo rehetra mahazo ny mailakao. Tsara ihany, sa tsy izany? (mozika mahafinaritra) Hey, Sharyn avy ao amin'ny Excel at Work aho, izay anomezanay fanohanana mivantana, tsy ara-teknika hanampy anao ho tonga matoky tena, mamokatra ary mpampiasa azo antoka amin'ny Microsoft Office.
Amin'ity lahatsoratra ity dia mandalo scenario iray aho izay mandefa hafatra amin'ny vondron'olona tsy mifankahalala, hasehoko anao ny fomba hanafenana adiresy mailaka ary handefasako hafatra am-pahatokisana amin'ny vondrona mahafantatra fa voatahiry ny mombamomba anao manokana mitokana. Ary raha manana torohevitra hafa mety hanampy anao amin'ny hafa ianao, zarao amin'ireo fanehoan-kevitra etsy ambany, tianay ny maheno anao. Salama, tsara, eto aho ao amin'ny Outlook ary te-hiresaka momba izany.
Avy tena izy io na avy amin'ny, mivoaka aho ary manao atrikasa any Outlook ary mandre matetika fotsiny aho, lazain'ny olona amiko fa nanao an'io izy ireo ary nisedra olana ary tsy tiako ho anao izany. Ka ndao hiresaka momba izany, rehefa mamorona mailaka vaovao aho dia hiakatra eto fotsiny ary tsindrio ny mailaka vaovao. Ary rehefa mamorona mailaka vaovao amin'ny vondron'olona tsy mifankahalala izahay, ary ny tiako holazaina amin'izany, ohatra tsara dia rehefa mandefa ny taratasim-bolan'ny orinasa ianao na angamba fanasana amin'ny hetsika any amin'ny orinasa sy ny zavatra farany tianao hatao, alao ny adiresy mailaka an'ny tsirairay ary ao anatin'ireo boaty na boaty CC, satria ny zava-mitranga rehefa mahazo ny hafatra ny olona, ​​dia afaka mahita marina ny adiresy mailaka rehetra ao anatin'ireto sehatra roa ireto.
Ka hampahafantariko anao ny sehatra vaovao. Ka raha miakatra amin'ny tabilao Safidy fotsiny aho dia mandeha fotsiny, raha toa ianao ka manana kinova taloha, dia mety ho hitanao ny Ribbo feno n. Ka eo amin'ny boaty BCC fotsiny no tsindrio.
Izany dia miankina amin'ny sekoly nianaranao, inoako hoe inona no antsoinao hoe BCC. Misy olona miantso azy io ho dika fahalalam-pomba an-jambany, misy kosa miantso azy io ho dika mitovy. Heveriko fa ny bitika jamba dia ilay bitika ifantohantsika eto.
solosaina miadana onedrive
Ka tsindrio eo io ary ho eo amin'ny sehatry ny hafatra izao hahafahantsika mampiditra fampahalalana mora foana ny zavatra tokony hataonao manomboka izao. Raha mandefa hafatra amina olona maromaro tsy mifankahalala ianao dia aza miditra eto ny adiresin'izy ireo. Mazava ho azy fa izaho, fa mody manao fotsiny.
Ary mety nandeha tany Duncan aho ary iza no olona hafa ao, hampiasa ny fampiofanana iray fotsiny aho, dia i Ted E. Bear. Ka raha tena tratrako ireo olona telo ireo ary tsy fantatr'izy ireo izahay hoe inona no hitranga raha alefako izany, toy ny taratasim-panoratan'ny orinasa, manorata zavatra avy eo manampy fotsiny ny fifamatorana amin'izay mety hitranga dia iray amin'ireo olona telo ireo na olona maro no mety ho sosotra be satria vao avy nizara ny mombamomba azy ireo tamin'ny olona tsy fantany.
Raha ny marina dia niofana tamina orinasa mpahay lalàna aho ary ny iray tamin'ireo mpisolovava tao dia nilaza tamiko fa tao amin'ny atrikasa iray izahay, atrikasa lehibe iray ary nilaza tamiko ny iray tamin'ireo mpisolovava fa nahazo gazety tao amin'ny gym izy ary ny mailaka nataony -Address dia tao ny tampon'ny sahan'i To ary tsy faly izy ary nampahafantariny anao. Tsy haiko raha te handre amin'ny mpisolovava iray izay tsy faly aho. Andao ary, izany no tena tiako indrindra raha mahita anao manao izany aho.
Mazava ho azy fa ny tiako holazaina dia hoe raha mandeha toy izany fotsiny aho ary manangona azy fotsiny ary misintona azy dia afaka misintona azy ... ilay boaty BCC.
Mazava ho azy, ity dia fomba iray hanatanterahana izany, na azonao atao ny manomboka manoratra ny anaran'ny olona ao amin'ny sahan'ny BCC, koa apetrako ao amin'ny adiresy eto amin'ny To ny anaran'i Duncan. Midika izany fa rehefa mahazo izany ny olona dia mampiseho ny adiresy mailaka fotsiny ianao ary mazava ho azy fa avy aminao ihany izany, ka tsy olana lehibe izany. Ary eto ambany dia tsy ho hitan'izy ireo ny iray amin'ireo adiresy mailaka napetraka tamin'ity sehatra ity, tsy maninona ny milaza hoe, oopsie, handeha fotsiny aho, angamba tokony hahazo ny mailakao aho, apetraka eto ny teboka nampidiriko. .
Afaka nisoratra anarana teto tokoa aho, nandray anjara. Ary avy eo azoko natao ny nametraka ny anaran'ny olona teto, saingy azo antoka, ireo anarana, raha ny tena izy dia tsy manana fampahalalana manokana. Ka, misy hevitra tsy ilainao, fa hevitra fotsiny.
Ny tsaroako fotsiny dia hoe handeha ho any Duncan ity, ka dia tsindrio fotsiny ny bokotra handefasana ary handeha aho. Mazava ho azy fa hahazo kopia ihany koa ianao. Ka raha miandry azy hiditra fotsiny isika.
Ka dia hitanao eo no ho eo fa tsy hitan'ny hafa ireny adiresy mailaka ireny, izany no hitany, ny roa dia ao ambony, izay miharihary, ny adiresin'i Anne ao, ary dia izay, izay ihany no hitany. Ka raha mijanona fotsiny aho dia manana ny adiresin'i Gmail an'i Duncan ihany, eto izany. Ka ity ny mailaky ny orinasa niditra, tsy tena nampiako ilay firaiketam-po, sa tsy izany? Menatra tokoa ianao rehefa manao an'io? Ka, nosokafako hatrany hatrany hatrany, dia mankany amin'i Anne io, saingy tsy hitako izay fampahalalana avy any.
Noho izany, mahafinaritra be ity ary mazava ho azy fa miaro tena ianao, miaro ny mombamomba azy ireo ary toa matihanina ihany koa rehefa hitan'ny olona fa miaro ny mombamomba azy ireo ianao, Hey, jereo, ary raha mbola ao amin'ny Gmail izahay, jereo anao ity eo, handeha hanoratra aho, jereo, eto. Noho izany, raha mpampiasa Gmail ianao, ohatra amin'ny fampahalalana mailakao manokana ary mety ho an'ny klioba na zavatra toa izany aza, mazava ho azy fa afaka manao BCC fotsiny ianao ary manao ilay zavatra mitovy aminy sy ny tena karazana, ny valiny mitovy hitranga. Manantena aho fa hitanao fa mahasoa ity ary tena miahy anao izahay hiaro anao Tsy mbola nahita an'izany ianao, manomboka mampiasa azy.
Raha ny marina dia manome sosokevitra aho fa isaky ny mampiasa vaovao ianao dia avelao ny BCC. Mazava ho azy fa azonao atao ny mamadika sy mamono azy io, mandehana amin'ny safidinao fotsiny ary toggle io, velomy, vonoo. Fa raha eo izy, farafaharatsiny mba eritreritrao, sa tsy izany? Angamba tokony hampiasa an'ity BCC ity aho, miafina an-jambany izy io, hamatoky fa tsy hitan'ny olona ny adiresy mailaka mpandray, ny olon-kafa tsy afaka mahita ny adiresy mailaka mpandray rehetra.
Ka antenaiko fa nanampy tamin'ny adiresy mailaka tsy miankina amin'ny ho avy io. Mety ho mendrika ny mankany amin'ny kiheba Messages, manamarina ny boaty BCC anao mba hahitana azy hatrany ary fampahatsiahivana tsara rehefa mandefa hafatra amin'ny vondron'olona ianao. Raha nanampy izany azafady ampahafantaro ahy amin'ny hevitra etsy ambany.
Ary raha te hifandray ianao dia tsindrio fotsiny ny bokotra Like ary alao antoka fa hisoratra anarana izahay satria mizara lahatsoratra vaovao tsy tapaka izahay ary raha fantatrao ny olona afaka mahazo tombony amin'izany dia mba zarao aminy ity lahatsoratra ity. Hey, misaotra nijery ary manana andro mahafinaritra.
Afaka mahita mpandray tsy fantatra ve ianao?
Raha atao teny hafa, tsy misy fombahitadyiza noianareobcc'ed tamin'ny mailaka nivoaka tamina programa mailaka sasany. Ny fehiny dia ny maka fotsiny ajereoamin'ny hafatra ao amin'ny fampirimana nalefanao.RAHAeo ny fampahalalana, tokony haseho.
Azonao valiana daholo ve ireo mpandray tsy fantatra?
Re:ve'Valio daholo'mandefavalinymankany amin'ny BCCmpandray? Tsia.Valiny Rehetravao afakanavalin'iamin'ireo adiresy mailaka nalefa miaraka amin'ny mailaka ao amin'ny lohateny. Ny adiresy BCC dia tsy alefa any amin'nympandrayamin'ny lohatenin'ny mailaka.28 Mey 2017
Ahoana no fomba andefasako mailaka miaraka amin'ireo mpandray miafina?
Ahoana ny fandefasana mailakanyMpandray tsy ekena
Mamorona hafatra vaovao ao amin'nymailakampanjifa.
KarazanaMpandray tsy ekenaao amin'ny saha To: arahin'nymailakaadiresy ao< >. ...
Ao amin'ny saha Bcc: soraty daholo ireomailakaadiresy tokony hisy ny hafatranalefaka, sarahina amin'ny koma.
tombontsoan'ny multiplayer tsy hita
Inona no dikan'ny hoe 'mpandray tsy ekena' amin'ny mailaka?
Inona no dikan'ny 'Mpandray tsy fantatra' amin'ny mailaka? Inona no dikan'ny 'Mpandray tsy fantatra' amin'ny mailaka? Rehefa alefa amin'ny olona marobe ny mailaka, ny andian-teny hoe 'mpandray tsy ekena' dia midika fa nafenina ireo adiresy mailaka an'ny mpandray.
Ahoana ny fomba hanoratana adiresy mailaka ho an'ny adiresy mailaka tsy fantatra?
Soraty ny 'Undisclosed' (tsy ampidirina ny mari-teny nalaina) tamin'ny tsanganana First Name, ary ny 'Recipients' amin'ny tsipikaame. Raha toa ka mitaky adiresy mailaka iray farafahakeliny ho lisitra ao amin'ny saha 'to' ny programa mailakao, soraty ny adiresy mailakao amin'izany.
Iza no famaritana tsara indrindra ny teny tsy ambara?
Famaritana ny tsy fantatra: tsy nampahafantarina: tsy voatonona na tsy fantatra: tsy naseho fivoriana tany amin'ny toerana tsy fantatra loharano tsy fantatra fa vola tsy fantatra Ohatra amin'ny tsy voalaza ao amin'ny fehezan-teny ohatra tato amin'ny Internet Nanaiky ihany koa ny minisitra fa homena vola Higgins ny vola tsy takatra ho tambiny.
Misy fomba iray hamakiana ireo mpandray tsy fantatra amin'ny Gmail?
(Tsy mitaky an'izany ny Gmail.) Raha tsy izany dia avelao ho foana. (Raha tsy hoe misy mpandray ny mailaka tianao ho hitan'ny olon-drehetra.) Amin'ny programa mailaka sasany dia mila manova ny 'Display as' ianao mba hamakiana ireo 'Recipients tsy fantatra. Soraty ireo mpandray tsy voaroaka na safidio rehefa mipoitra ilay boaty.